झाँक्रीले बिरामीको पेट चिरिदिएपछि… « Naya Page
झाँक्रीले बिरामीको पेट चिरिदिएपछि…
प्रकाशित मिति : 11 September, 2019 7:59 pm
धादिङ, २५ भदौं । कमलपित्त (जण्डिस) को उपचार गरी शरीरको विकार फालिदिने भन्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का एक जना लामा झाँक्रीले बिरामीको पेट चिरेर रगत चुसेपछि बिरामी सिकिस्त भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका नीलकण्ठ नगरपालिका–३ का गजबहादुर लामाले लामो समयदेखि उपचार गर्ने भन्दै बिरामीको पेट चिर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिका–९ झगरेका ३९ वर्षीय राजु मगरको गत भदौ १५ गते पेट चिरेर उपचार गरेको भन्दै झाँक्रीले रगत समेत चुसेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीले बताए ।
सोही बेला उपचारका लागि भनेर कमलपित्त तानेको, औषधि दिएको र विकार तानेको भनेर बिरामीसँग रु आठ हजार ३८० रकम लिएर पत्तीले देब्रेपट्टी पेटमा चिरेको बिरामीको श्रीमती विमलाले जानकारी दिइन् ।
पेट चिर्ने बेलामा झाँक्रीले बिरामीको श्रीमती र सँगै गएका बहिनीलाई बाहिर निकालेर पेटमा सुई लगाएर बिरामीको पेटमा चिरेका थिए । पेट चिरेपछि आएको रगत समेत झाँक्रीले आफूले चुसेको बिरामी मगरले बताए ।
करीब दुई महिनादेखि कमलपित्तले थलिएका मगर कमलपित्तसँगै झाँक्रीले चिरेको घाउ समेत पाकेपछि वीर अस्पतालमा पठाइएको छ । कलेजोको समस्या समेत देखिएकाले थप उपचार आवश्यक भएको र सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि यसरी पठाइएको जिल्ला अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
लामा तान्त्रिक विधिद्वारा उपचार गराउँदै आइरहेका विवादित व्यक्ति हुन् । उनको यसअघि पनि केही घटना विवादमा आएका थिए ।
तीन वर्षअघि पनि धादिङ मूलपानीकै एक महिलाको पेटमा रहेको पाँच महिनाको बच्चा उपचार गर्ने बहानामा फालिदिएका थिए । ती महिलालाई प्रहरीकामा उजुरी गर्न भनिए पनि लामा झाँक्रीले डरधम्की देखाएर तर्साएपछि उजुरी नगरेको अधिकारकर्मी राधिका सापकोटाले जानकारी दिइन् ।
घटनाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मोतिराम भट्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेकाले आवश्यक कारवाही गरिने बताए ।
१३ औं साग : नेपाललाई विश्व कीर्तिमानसहित एकै दिन १३ स्वर्ण (अपडेट)
नातिनीको पेटमा हजुरबाको गर्भ !
शहरभित्रको कहर : चिसो काठमाडौंमा बोराभित्रको बास !
महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या, जोगिन खोज्दा खोज्दै सकिनन् उम्किन
काठमाडौं, २१ मंसिर । गायन रियालीटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन–२ को उपाधि राम
दुई अर्बमा नाइट क्लबसहितको ‘स्काई वाक टावर’ बनाइने
काठमाडौं, २१ मंसिर । काठमाडौंको कमलादीमा ‘स्काई वाक भ्यू टावर’ बन्ने भएको छ । वन्डरर्स
बक्सिंग : तीन नेपाली महिला बक्सर फाइनलमा
काठमाडौं, २१ मंसिर । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत बक्सिंगतर्फ दोस्रो दिनको खेलपछि तीन
वाग्मतीको थापाथली किनार सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण
काठमाडौं, २१ मंसिर । थापाथलीस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (युएन) स्तम्भ क्षेत्रमा रहेको वाग्मती नदी किनारको
हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र गुणस्तर प्राथमिकतामा : पर्यटनमन्त्री भट्टराई
काठमाडौँ, २१ मङसिर । डिसेम्बर ७ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस आज(शनिबार) नेपालमा पनि विविध